February | 2017 | Dayniile.com
Maxaa Caawa ka socda hooyga uu Kheyre ka degan yahay Villa Somalia?
Feb. 28 WARKA MAANTA Comments Off on Maxaa Caawa ka socda hooyga uu Kheyre ka degan yahay Villa Somalia?
Muqdisho (Deyniile Media)-War goordhow nasoo gaaray ayaa sheegaya in Ra’isul wasaaraha magacaaban Xasan Kheyre uu Caawa kulamo kala duwan la qaadanaayo qaar kamid ah Xildhibaanada BFS.
Ra’isul wasaaraha magacaaban ayaa Xildhibaanada kula kulmaayo hooyga uu ka degan yahay Madaxtooyada Somalia, waxaana la soo sheegayaa in Xildhibaanada uu weydiisanaayo codka kalsoonida.
Xildhibaanada uu Caawa la kulmaayo Ra’isul wasaaraha ayaa kor u dhaafaaya 40 Xildhibaan waxaana la xaqiijinayaa in Xildhibaanadaasi ay isugu jiraan beelo kala duwan.
Xasan Kheyre oo saacado ay uga harsan tahay hortagida Baarlamaanka ayaa culeyska saaraya in Xildhibaanada BFS uu ka dhaadhiciyo inay siiyaan codka si uu usoo dhiso Golaha Wasiirada Xukuumada Cusub.
Xildhibaanada uu Caawa la kulmaayo Ra’isul wasaaraha ayaa u muuqda kuwo la dhacsan magacaabidiisa, waxaana loo badinayaa in Kheyre uu heli doono kalsoonida Xildhibaanada.
Dhinaca kale, waxaan la ogeyn ballanqaadyada uu Ra’isul wasaaraha caawa u sameyn doono Xildhibaanada uu la kulmaayo.
Qorshe uu damacsan yahay madaxweyne Farmaajo oo walaaciyey shaqaalaha Villa Somalia
Feb. 28 WARKA MAANTA Comments Off on Qorshe uu damacsan yahay madaxweyne Farmaajo oo walaaciyey shaqaalaha Villa Somalia
Muqdisho (Deyniile Media) – Iyadoo uu Madaxweyne Farmaajo magacaabay Agaasimaha iyo Ku-xigeenka Madaxtooyadda ayaa waxa soo baxayo qorshe lagu doonayo in Isbedel lagu sameeyo Waaxyaha hoos taga Madaxtooyada iyo in la yareeyo tirada Shaqaalaha ka hawl-gala Villa Somalia.
Wararka ayaa sheegayo in inta badan Waaxyaha Villa Somalia la isku dari doono, si loo soo kobo madaxda iyo shaqaalaha ka hawl-gala, qorshahaas oo madaxweynaha uu damacsan yahay
Isku-shaandheyntaasi ayaa waxa ay walaac xooggan ku beertay Shaqaalihii caadiga, kuwaasi oo ka cabsi qaba in shaqada laga ruqseeyo, laguna soo bedelo shaqaale cusub.
Qaar ka mid ah sahqaalihii Villa Somalia ayaa iskood uga tegay, kadib, markii Mdaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud xilka ku wareejiyey Madaxweyne Farmaajo.
Waa arrin caadi ah in marka Madaxda Qaranka xilka kala wareegaan inuu Isbedel lagu sameeyo Shaqaalaha iyo Mas’uuliyiinta Waaxyaha Xarunta Madaxtooyadda ee Villa Somalia kadibna la keensado saaxiibo cusub.
Muqdisho: Wadihii Gaariga ku qarxay Muqdisho oo lasoo bandhigay (Sawirro)
Feb. 28 WARKA MAANTA Comments Off on Muqdisho: Wadihii Gaariga ku qarxay Muqdisho oo lasoo bandhigay (Sawirro)
Muqdisho (Deyniile Media)-Hay’adaha amaanka Dowlada Somalia ayaa soo bandhigtay dhaawaca mid kamid ah Ragii la socday gaari ku qarxay agagaarka Ex-Control Afgooye ee magaalada Muqdisho.
Ninkaani la soo bandhigay ayaa la sheegay inuu ahaa wadihii gaari Qarxay, iyadoo sababta uu u baxsaday lagu sheegay in gaariga qarxay uu bacaad kaga galay.
Naftii haligahaani la soo bandhigay ayaa waxaa uu dhaacaw kasoo gaaray gacanta, waxaana la sheegay in cidamada amaanka ay kala soo baxeen mid kamid ah Isbitaalada ku yaalla magaalada Muqdisho oo lagu dabiibaayay.
Ninkaani wadaha ka ahaa Gaariga Qarxay ayaa iminka ku jira gacanta Ciidamada NISA, oo iyagu u fidiyay gargaar caafimaad inta uu ka bogsanaayo.
Xog: Farmaajo oo wali caqabado kala kulmaaya go’aanka uu ku magacaabay Kheyre xili maalinta beri ah…
Feb. 28 WARKA MAANTA Comments Off on Xog: Farmaajo oo wali caqabado kala kulmaaya go’aanka uu ku magacaabay Kheyre xili maalinta beri ah…
Muqdisho (Deyniile Media)-Waxaa isa soo taraaya caqabada Madaxweynaha JFS Maxamed C/llahi Farmaajo ka heysata hirgalinta go’aanka uu ku magacaabay Ra’isul wasaaraha Xukuumada Somalia Xasan Kheyre.
Waxaa soo baxaaya warar sheegaya in Madaxweyne Farmaajo ay ku dhagan yihiin qaar kamid ah Beelaha Hawiye kuwaa oo dhaliil ka keenay hanaanka lagu magacaabay Xasan Kheyre.
Beelaha ku dhagan Madaxweynaha ayaa la sheegay inay kamid yihiin Habar-gidir iyo Abgaal kuwaa oo ku doodaaya inaysan ka raali noqon doonin go’aanka lagu magacaabay Ra’isul wasaare Xasan Kheyre.
Labada beel ayaa ku goodiyay inaysan la shaqeyn doonin Ra’isul wasaaraha magacaaban haddii uusan Madaxweynaha ka qancin Magacaabida, maadaama loolanka xilkaasi ay ku jireen labada Beel.
Madaxweyne Farmaajo ayaa labadaasi beel u ballanqaaday inuu siin doono labada Wasaaradood ee ugu tayada badan, walow wararka aan heleyno ay tibaaxayaan inay ka biya diideen.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale labada beel u sheegay in sababta ugu weyn ee uu u magacaabay Xasan Kheyre ay tahay in min Seddex laf oo ka tirsan labada beel ay isku qabsadeen xilka, balse waxa uu ku adkeysanayaa inuu siin doono Wasiiro muhiim ah, isla markaana ay muhiim tahay inay ku qancaan isbedelka.
Farmaajo ayaa wali ku adkeysanaaya in Xasan Kheyre uu yahay Ra’isul wasaaraha cusub maadaama uu qalinka ku dhacay waxa uuna meesha ka saaray in beel gaara oo kamid ah Beelaha Hawiye ay leedahay Ra’isul wasaaraha.
Dhinaca kale, Madaxweyne Farmaajo ayaa la sheegay in go’aanka uu ku magacaabay Xasan Kheyre ay sababi karto kalsooni darro kasoo wajahda dhanka Beelaha waayay xilka Ra’isul wasaaraha ee la magacaabay xili maalinta Beri ah uu Kheyre hortagi doono Baarlamaanka labada aqal.
Feb. 28 WARKA MAANTA Comments Off on Sawirro: Madaxweyne Farmaajo oo ku dhawaaqay xaalad musiibo qaran
Muqdisho (Deyniile Media) – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Faramaajo), ayaa ku dhawaaqay in abaaraha ka jira dalka ay yihiin musiibo qaran oo u baahan in si degdeg ah looga jawaabo.
Xog: Sidee ayay Farmaajo, Kheyre iyo Jawaari ugu heshiiyeen dhismaha Golaha Wasiirada?
Feb. 28 WARKA MAANTA Comments Off on Xog: Sidee ayay Farmaajo, Kheyre iyo Jawaari ugu heshiiyeen dhismaha Golaha Wasiirada?
Muqdisho (Deyniile Media)-Kulamo saacadihii ugu danbeeyay Villa Somalia ku dhexmaray Madaxweynaha JFS Maxamed C/llahi Farmaajo, Ra’isul wasaaraha magacaaban Xasan Kheyre iyo Guddoomiyaha BFS Jawaari, ayaa waxaa looga wada hadlay Hanaanka lagu soo xuli doono Golaha Wasiirada xukuumada cusub.
Madaxweynaha oo ku hormaray talooyinkiisa, ayaa sheegay in Ra’isul wasaaraha looga baahan yahay in inta badan Wasiirada Cusub uu ka keeno bannaanka, waxa uuna ka biya diiday in Xukuumada cusub ay ku bataan Xildhibaanada.
Madaxweyne Farmaajo, waxa uu Xasan Kheyre iyo Jawaari usoo jeediyay in la kala madaxbaneeyo Xildhibaanadda BFS iyo xubnaha Golaha Wasiiradda, waxa uuna cadeeyay in Dowladiisu aysan qaadi karin Xildhibaano hadana ah Wasiiro.
Farmaajo waxa uu sheegay in sababta uu kaga hor imaanayo in Xildhibaanada lagu daro Golaha Wasiirada ay tahay in Dowlada cusub ay caqabado iyo kala sooc u horseedi karto Golaha Baarlamaanka Somalia oo iminka mideysa.
Ra’isul wasaaraha magacaaban Xasan Kheyre ayaa isaga soo dhaweeyay soo jeedinta Madaxweynaha Somalia, waxa uuna ku raacay in la kala qaado Golaha Wasiirada iyo Golaha Shacabka, waxa uuna cadeeyay in xubnaha Xukuumadiisa uu kala imaan doono dibadda.
Guddoomiyaha BFS Maxamed Sheekh Cusmaan ”Jawaari” ayaa sidoo kale soo dhaweeyay talada Madaxweyne Farmaajo waxa uuna kulanka ka sheegay in waligii uu ahaa mid kasoo horjeeda in Xildhibaanada loo magacaabo Wasiiro, waxa uuna soo dhaweeyay in Xildhibaanadda u khaas noqdaan Sharci dejinta iyo Hawlaha culus ee Barlamaanka.
Xogtu waxa ay intaa kusii dareysaa in Madaxweyne Farmaajo, Guddoomiye Jawaari iyo Ra’isul wasaaraha magacaaban, Xasan Cali Kheyre ay isla qaatay in 80% xubnaha Wasiiradda Cusub ka yimaadaan meel ka baxsan Xildhibaanadda BFS, si loo helo Shaqo Hufan iyo Isla-xisaabtan Joogto ah.
Dhinaca kale, Ra’isul wasaaraha magacaaban ayaa la filayaa in Golahiisa Wasiirada uu ku dhawaaqi doono Seddex maalin kadib markii la ansixiyo.
Feb. 28 WARKA MAANTA Comments Off on Xog: Sidee ayey Farmaajo, Kheyre iyo Jawaari ugu heshiiyeen dhismaha golaha wasiirada?
Muqdisho (Deyniile Media) – Kulamo Villa Somalia ku dhexmaray Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llahi Farmaajo, Ra’isul wasaaraha magacaaban Xasan Kheyre iyo Guddoomiyaha BFS Jawaari, ayaa waxaa looga wada hadlay Hanaanka lagu soo xuli doono Golaha Wasiirada xukuumada cusub.
Ilo lagu kalsoon yahay ayaa Deyniile Media u sheegay in Madaxweynaha uu ra’iisul wasaaraha u sheegay in looga baahan yahay in inta badan Wasiirada Cusub uu ka keeno bannaanka, oo ay xildhibaano ka mid noqon, waxa uuna ka biya diiday in Xukuumada cusub ay ku bataan Xildhibaanada sida caadada u ahayd xukuumadii hore.
Ra’iisul wasaaraha magacaaban Xasan Kheyre ayaa isaga soo dhaweeyay soo jeedinta Madaxweynaha Somalia, waxa uuna ku raacay in la kala qaado Golaha Wasiirada iyo Golaha Shacabka, waxa uuna cadeeyay in xubnaha Xukuumadiisa uu kala imaan doono dibadda, sid ay ilo-wareedyada u sheegeen Deyniile Media.
Akhriso: Madaxweyne Farmaajo oo goordhow magacaabay xil muhiim ah
Feb. 28 WARKA MAANTA Comments Off on Akhriso: Madaxweyne Farmaajo oo goordhow magacaabay xil muhiim ah
Muqdisho (Deyniile Media)-Madaxweynaha JFS Maxamed C/laahi Farmaajo, ayaa goordhow magacaabay la-taliyihiisa dhanka arimaha Bulshada, sida lagu sheegay Digreeto ka soo baxday Xafiiska Madaxweynaha Somalia.
Madaxweynaha ayaa Digreetada ku magacaabay Caasho Abokar Qaasim, oo noqoneysa la-taliyaha dhanka arimaha Bulshada Madaxweynaha Somalia.
Haweenaydaan ayaa la sheegay inay khibrad u leedahay dhanka arimaha Bulshada, sidaasi awgeedna loogu magacaabay xilkaan.
Sawirro: Madaxweyne Farmaajo oo shir caalami ah ka furay Muqdisho
Feb. 28 WARKA MAANTA Comments Off on Sawirro: Madaxweyne Farmaajo oo shir caalami ah ka furay Muqdisho
Muqdisho (Deyniile Media) – Madaxweynaha Somalia, Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa saakay furay shirka heerka salami ee gurmadka abaaraha, kaasoo ay kazoo qeybgaleen madaxda maamulada dalka, gobolka banaadir iyo wakiilada beesha caalamka ee ka howlgala Somalia.
Shirkaan ayaa waxaa guddoominayo madaxweynaha Somalia Maxamed C/llaahi Farmaajo oo isugu yeeray in laga soo qeybgalo.
Inta uu socdo ayyaa waxaa la isku dhaafsan doono in wadajir ah loogu howlgalo wax ka qabashada abaaraha ku dhuftay dalka, waxaana laga soo saari doonaa war murtiyeed qeexaya u gurmashada dadka dhibaateysan.
Sawirro: C/wali Gaas oo furay keydka Haamaha shidaalka Diyaaradaha ee Boosaaso
Feb. 28 WARKA MAANTA Comments Off on Sawirro: C/wali Gaas oo furay keydka Haamaha shidaalka Diyaaradaha ee Boosaaso
Boosaaso (Deyniile Media)-Hogaamiyaha maamulka Puntland Cabdiwali Gaas, ayaa maanta xariga ka jaray Keydka Haamaha Shidaalka Diyaaradaha ee Garoonka Magaalada Boosaaso.
Hogaamiyaha maamulka ayaa sheegay in Puntland ay diyaar u tahay muujinta horumarka, waxa uuna sheegay in Keydkaani uu anfici doono Diyaaradaha isticmaala Garoomaha Puntland.
Hogaamiyaha ayaa sheegay in Ganacsatada deegaanka looga baahan yahay inay la imaadan qorshooyin Ganacsi oo lagu hormarinaayo Puntland, waxa uuna mahad celin u jeediyay Ganacsatadii Hirgalisay Keydka Haamaha Shidaalka Diyaaradaha.
Gaas, ayaa Ganacsatada kale ugu baaqay in Hantidooda ay gishtaan dhulkooda, waxa uuna cod dheer ku sheegay in Puntland ay saaxiib u tahay Ganacsiga iyo wax soo saarka.